Masherufu emapuranga anoenda neese kamuri mumba medu | Bezzia
Masherufu emapuranga anoenda neese kamuri mumba mako
Kana isu tichifunga zvekushongedza, zviri pachena kuti masherufu emapuranga Ivo ndeimwe yesarudzo idzo dzatisingafanire kupotsa. Ivo anokosha chaizvo uye kwete chete kune imwe imba mumba asi kune akati wandei. Tinochida sechinhu chekushongedza asiwo seyuniti yekuchengetera.
Naizvozvo, pachagara paine chinoenderana nezvatinoda asiwo nekamuri yega yega. Naizvozvo, isu tinoongorora zvese izvo zvichatiburitsa mukukurumidza uye izvo panguva imwechete zvichafukidza makona ese. Iwe unoda kuziva sei shongedza imwe neimwe yemakamuri ako navo?
1 Masherufu epamusoro emapuranga ekushongedza dzimba dzekugara
2 Masherufu emapuranga edhesiki kana enzvimbo dzehofisi
3 Zvikwere zvakadzika zvemakamuri evana
4 Masherufu akakwana eimba yekurara
5 Shelving isina nzvimbo yekuparadzanisa pasi
Masherufu epamusoro emapuranga ekushongedza dzimba dzekugara
Zvichida muimba yekutandarira tinoda kuona kuti iyo masherufu akareba uye akatetepa anotora nzvimbo yakakura. Ichokwadi kuti kune rumwe rutivi, kuti ugone kuisa mabhuku, iwe unogona kugara uchibheja pashongwe dzakareba uye dzakamanikana. Asi isu tinoziva zvakare kuti modular nziyo ndeimwe yemazano makuru. Izvi ndezvekuti isu tinogona kuisa akati wandei aya masherufu, imwe padivi peimwe. Saka isu tichaumba chimiro chakakura kana ndiko kuravira kwedu uye kana nzvimbo ichibvumira. Asi ngazvive sezvazvingave, hongu kuti mudzimba dzekugara ivo vanobheja zvakanyanya pamasherufu aya seshongwe.
Masherufu emapuranga edhesiki kana enzvimbo dzehofisi
Ichokwadi kuti hapana chaiyo nzira yekushongedza, nekuti ivo vanogona kunge vasingagumi sezvo paine zvido. Asi mumahofisi kana mumakamuri ekufunda, tinogona kubheja pane masherufu. Nenzira iyi, Tichaisawo mabhuku kana mafaera uye anozounganidzwa zvakanyanya sezvo ari pamadziro. Navo tichave tichichengetedza nzvimbo huru, sezvo kutora mukana kwemadziro kunogara kuri imwe yesarudzo dzakanakisa dzatinadzo.
Pedyo nemashefu isu tinogona zvakare kusarudza masherufu akaenzana anogona kusanganiswa pamadziro nenzira dzisinganzwisisike. Nekudaro, isu tichagadzira chaiyo yepakutanga mhedzisiro mukushongedza kwedu. Chinhu chakanaka pamusoro pemasherufu emapuranga uye maumbirwo avo ndeekuti tinogona kuzvibatanidza zvisinei isu zvatinoda uye kunyange kupenda kana iwe uchiona zvichidikanwa. Nekuti mavara ndeimwewo eaya ekushongedza ruzivo atinogara tichida.
Zvikwere zvakadzika zvemakamuri evana
Kune emakamuri ekurara ediki pane imba, isu tinodawo akateedzana masherufu ayo anotibatsira kuchengetedza matoyi ese nemabhuku. Naizvozvo, hapana chinhu senge kubheja pazvikwere futi. Izvi zvinogona kuwanikwa mumarudzi akasiyana siyana uye ivo vanove vanopfuura kukwana kunakidzwa nharaunda ine hupenyu uye inofara mune zvakajairika. Kuwedzera kune ese mamodheru atinogona kuwana, zvinofanirwa kutaurwa kuti isu tinoda kuti uve huni husingabatike, nekuti isu tatoziva kuti hatidi njodzi dzisina basa.
Masherufu akakwana eimba yekurara
Imwe yenzvimbo huru imba yekurara. Naizvozvo, tinovada kuti vasangane nezvinodiwa munzvimbo ino uye pamusoro pezvose, ivo vanozotarisa pane iyo headboard chikamu. Saka pano tinogona kuwana masherufu anochengeta izvo zvinodiwa semawachi wachi, mabhuku nezvimwe zvinhu zvekushongedza. Asi zvakare ichokwadi kuti iwe unogona kusarudza kumira uye modular masherufu, nguva dzose zvichienderana nenzvimbo yaunayo. Iyo yakanaka pfungwa kugona kuipa iyo yekugadzira yekubata iwe uchiyedza kuchengeta zvese zvaunoda mavari. Kana iwe usina nzvimbo, iwe unotoziva kare kuti madziro achiri edu epamoyo shamwari.
Shelving isina nzvimbo yekuparadzanisa pasi
Kana isu tichida kudzikisira nzvimbo, isu tinazvo zvakapusa. Tinogona kubheja pane zano rakadai rino rakanangana nekunakidzwa nesherufu isina pasi, ndokuti, yakavhurika, uye kuiisa kune patsanura dzimba mbiri dzekugara kubva kudzimba dzekudyira nenzvimbo dzekupinda. Pfungwa yekugadzira iyo ichave yakakwana kujoina ese masitayera ekushongedza iwe aunofunga. Iwe unofarira masherufu emapuranga here? Ungavaisa kupi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Masherufu emapuranga anoenda neese kamuri mumba mako
Tsvaga Bloom, iyo SS21 muunganidzwa weCompañía Fantástica
Iwo manicure mazano ari kuzotsva muzhizha rino 2021